TiVo vs DVR, oo ka mid ah waa ka wanaagsan?
Sidaas oo ay tahay in aad doorato - DVR ama TiVo ah? Waa hagaag, haddii aad doorato in aad la TiVo ah, inaad helayso DVR ah. Waxa kaliya version gaar ah leh DVRs caadiga ah ka shirkadda cable ma laha. Bal aan sameeyo is barbardhig yar oo ka mid ah laba qalab si aad mid ka mid ah in adiga kuu wanaagsan ka qaadan kartaa.
TiVo ahaa mid ka mid ah qalabka DVR markii hore oo uu suuqa 1999. A DVR kuu ogolaanayaa inaad si ay u qoraan barnaamijyada television in ay mar dambe ka daawan. Taas macnaheedu waxa weeye in aad ku qori karta wax baahinta waqti isku mid ah sida show kale, ama barnaamijyo record inta aad tageen. Ka dib markii TiVo iyo shirkadaha kale ee soo bandhigay DVR shirkadaha cable, bilaabay bixiya sanduuqyada iyaga u gaar ah in ay ku biireen sanduuqa cable la DVR ah, sidaas mar dambe ma waxaa loo baahnaa in ay laba sanduuq oo kala duwan. Labada qalabka ogolaado in aad yara joogsano oo dib u socon TV live. TiVo ayaa waxaa kor loogu qaaday ay soo bandhigid Roamio ah, oo ay feature ugu sanduuqa buuxiyey oo weli.
Sidaas sidee aad doorato midka aad rabto in aad isticmaasho? Bal aan eegno nooc kasta oo sanduuqa si faahfaahsan, waxaana rajeynayaa in soo saarto qaar ka mid ah wax qarsoon in.
1. Maxaad doonaysaa inay daawadaan?
The tuners TiVo waxaa loogu talagalay in la helo calaamadaha cable via card cable ah, ama signal geeyo ka kombiyuutar ah u shaqeeyaan. Buuxi meesha Baahida waa la heli karo, oo lagu daray channels kasta oo aad rabto in aad daawato. Ma aha oo keliya ee cable dambe, aad TiVo qulquli karaan barnaamijyadooda off internet-ka, oo ay ku jiraan Amazon Video Instant (ma Ra'iisul), Netflix, iyo Hulu Plus. Sanduuqa kale No waa inay awoodaan inay soo jiidaan barnaamijyada wada si ka badan hal qalab. Sidaas, waxaad daawan kartaa oo kaliya ay muujinayso aad rabto in aad marka aad rabto in aad si aan u daawado. TiVo baa lagu xaddidi karaa sida ay u fududahay waa in ay ku qoraan barnaamijyada HD, kuma qanci karo iyaga kala barnaamijyada qeexidda caadiga ah.
Haddii aad run ahaantii tahay galay music, TiVos ogolaado in aad sii qulquli music aad jeceshahay ka your computer via files aad ku kaydsan ama adeegyada kale sida Pandora.
Sanduuqa Cable DVRs ka Comcast iyo bixiyeyaasha kale cable ogolaan oo kaliya inaad hesho barnaamij ka channel line-upka iyo adeegga music ayay. Waxay sameeyaan soo baxaan channels HD ka channels SD ah, sidaas darteed waxaa fudud in aad hesho oo ay u qoraan barnaamij HD gaar ah.
2. Waa maxay nooca interface ayaad adigu rabtaa?
DVR A ka Comcast sida madal X1 ee kuu ogolaanaya in aad ka raadin by horyaalka, actor, sifayn, ama sports magaca kooxda. Waxay leedahay eegno garabaka Windows cusub 8, oo qoreysa naqshadeynta weyn u khariidad ah prettier.
The ka weyn sanduuqyada ay leeyihiin qaabka dheeraad ah oo aasaasi ah, laakiin weli ogolaan goobidda sahlan by liiska TV, horyaalka, actor, agaasimaha, ama keyword.
Baaritaanka on TiVo yihiin quruxsan fudud, sidoo kale, iyadoo baaritaan fudud samaysay by keywords la mid ah DVR ah. Sidoo kale waxay ku taageeri kartaa talooyin in la siiyo fursad ay ku ogaan barnaamijyada cusub ee aad.
Comcast wali isticmaala remotes RF, taas oo ay kala duwan kooban oo aad u baahan tahay in ujeedadoodu fog ee ama kaliya ilaa dhinaca reer sanduuqa DVR ah.
The remotes cusub ee X1 samayn oggolaadaan in aad isticmaasho amarrada cod, sidoo kale. DVRs waaweyn waxaa ka shaqeeya fog multifunction kaas oo sidoo kale koontarooli karin qalabka madadaalada guriga kale ah. Comcast ayaa soo bandhigay app cusub ee casriga ah oo kuu ogolaanaya in aad si sameeyaan qaar ka mid ah navigation aasaasiga ah oo isticmaalaya telefoonka.
The site bulshada warbaahinta Facebook iyo Rafaa music Pandora sidoo kale laga heli karaa barnaamijyadooda X1 DVR ee ku.
The user interface TiVo helo niinasaa internet-ka. Waxay leedahay screens midabo la sahlan loo akhriyi karo muuqaallo kale. Waxa kale oo kuu ogolaanaya in aad astaysto TV taxay hage, baabi'inta channels ah oo aadan rabin in aad aragto ama aadan ku xirmo aad, nadaafadda ku taxay badan oo ilaa xad ah. Waa in la ogaadaa in badan oo ka mid ah bedeley TiVo wali SD ee macaamiisha aan weli HD, laakiin waxa ay ku timaado niyad kuwa sameeyo.
The fog TiVo naqshadeeyay shirkadda in ay user ka badan saaxiibtinimo. Waxa uu isticmaalaa midabyo iyo isku dhawaanshaha button la mid ah si ay u fududaato in la isticmaalo. Ma jiraan badhamada u badan sida in ay u badneyd, iyo qaabka looska waa fududahay in gacantaada ku hay.
La shaqaynta technology ee qarnigii 21-aad, ee Chine TiVo u oggolaadaan in aad isticmaasho qalabka la qaadi karo sida remotes, iyo in ka badan. Waxaad ka heli kartaa macluumaad content ku saabsan qalabka iyo boodaan si ay hal dhibic ka xushay barnaamijka isticmaalaya interface kiniinka. Waxaa isku xira in TiVo ee network wifi ah, si aad u isticmaali kartaa meel kasta oo guriga, ama xitaa ka baxsan guriga. App wuxuu kuu ogol yahay in ay baadhaan dhammaan bixiyayaasha aad ku xiran iyada oo aad TiVo, oo ay ku jiraan Hulu, Amazon, iyo Netflix. Waxa kale oo aad xakamayn kartid TiVo meel kasta oo aad inta aad leeyihiin internet.
3. Intee in leeg aad rabto in aad ku qaataan?
Iyada oo labada qalabka, aad filayso inaad lacag bixiso bil walba. Iyadoo Comcast, waa meel ka $ 10 ilaa $ 16 bishii u DVR ah, laakiin ma aha in aad si loogu bixiyo sanduuqa hore. Adeeg TiVo waa $ 15 bishii, oo aad leedahay si ay u iibsadaan sanduuqa, laakiin kaarka cable kharash kaliya ee u dhaxeeya $ 1.50 iyo $ 2.50 bil ah. Kacaysaa Tivos meel from $ 200 ilaa $ 600, iyada oo ku xiran sanduuqa. Kuwa qiimaha hoose ee drive yar adag iyo muuqaalada ka yar, leh sanduuqa dhamaadka sare bixiya adag drive weyn, afar tuners, iyo dhamaan sifooyinka dhamaadka sare iyo interface garaafka. Iyadoo ku xiran baakada aad lahaa doortaan marka la barbar dhigo sanduuqa TiVo laga yaabo in aad iibsato, waxa uu dhici karaa afar bilood ah ama si ay xitaa jebin.
Haddii aad dareentid in aad sanduuq oo aan shaqo haynin, waa isku bedelasho ah oo fudud ee xafiiska Comcast ee kuugu dhow si aad u hesho mid cusub. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad TiVo hoos u dhaco oo aan hoos iman damaanad, aad raadineyso weeyna ka iibsan mid cusub.
4. Imisa qol ha aad rabto in ay ku xidhmaan?
The DVR X1 cusub dhaqaaqi karaan barnaamijyada ku saabsan sanduuqa ugu weyn ee ay sanduuqyada kale ku yaal guriga oo dhan. Waxaad bilaabi kartaa daawashada hal qol, hakinta, iyo ku dhameysan daawashada bandhigga qol kale.
Qaar ka mid ah dadka waawayn ayaa arrimaha kala kulmeen helista sanduuqyada X1 ay qotomiyey iyo sanduuqyada dheeraad ah la hadalka midba midka kale. Qaar kale ayaa arkay barnaamijyada ay agtiinna ah ka menu kaliya ee uu soo laabto ka dib markii uu diilinta ganaaxa uu dib.
Iyadoo Roamio TiVo ah, aad jaray kartaa ilaa shan sanduuq oo la isticmaalayo TiVo mini ah, taas oo kharash dhan $ 130.
5. Intee in le'eg oo aad rabtid in aad si ay u qoraan?
The DVRs ka weyn oo ka tirsan shirkadda cable ogolaan doonaa in aad diiwaan laba barnaamij oo mar, oo waxaad ka daawan kartaa barnaamij kale oo la hor-duubay, halka laba kuwa lagu qoro. X1 wuxuu kuu ogol yahay fursad si ay u qoraan ilaa afar channels waqti isku mid ah, oo weli sii haystaan ​​awoodda in ay u daawadaan barnaamij oo dheeraad ah, halka ay ku qoro aad.
The sanduuqyada TiVo yihiin si ay u qoraan labo ilaa afar channels waqti isku mid ah, iyada oo ku xiran sanduuqa aad xulan awoodaan.
DVRs ayaa kala duwan awoodaha drive adag, laga bilaabo 75 saac in ka badan 500 saacadood oo waqti duubo. Waxay ku xidhan tahay oo kaliya oo ka mid ah aad soo qaado.
Sidaas daraaddeed waxaa aad u leedahay. Qaar ka mid ah macluumaad ku saabsan noocyada ugu muhiimsan ee DVRs aad ka heli kartaa in suuqa. Haddii aad ku faraxsan tahay oo aad cable dhigay ilaa iyo ay dhacdo waxa aad rabto in ay sameeyaan, DVRs cable leeyihiin meel iyo waxay tahay inay awoodaan inay si fudud oo qiime jaban lagu badalay, haddii ay u baxaan. Laakiin haddii aad raadinayso wax ka badan boosaska badan, TiVo ah waa habka ay u tagaan, tan iyo markii ay ku milmaan karaan dhammaan channels barnaamijyada aad galay hal meel.
Sida loo Ma canabka la No Hands on iPhone iyo Android
Talinayo Video Converter Alternative
Sida loo abuuro Video ah oo tayo sare leh
> Resource > Video > TiVo vs DVR, oo ka mid ah waa ka wanaagsan?